मैले यूट्यूब प्रतिक्रियाहरू किनेको खण्डमा म के फाइदा देख्छु?
उच्चतम गुणवत्ता टिप्पणी, म्यानुअली डेलिभर।
हामी तपाईंको भिडियो हेर्छौं र सान्दर्भिक टिप्पणीहरू लेख्छौं।
वितरण धेरै दिनहरूमा फैलिएको छ।
परिणाम-48-72 hours घण्टामा सुरू हुन्छ र पूर्ण नभएसम्म जारी रहन्छ।
हामी सँधै तपाईंको अर्डरको १००% डेलिभर गर्दछौं!
सबैजना किन YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्दैछन्?
जस्तो भनाइ छ; मान्छे बन्नु एक दिनको काम हैन, त्यसैले मँ भन्छु कि यूट्यूबमा सफल वा भाइरल भिडियो राख्नु पनि एक दिनको जागिर होइन। एउटा तथ्य जुन प्रायः व्यक्ति स्वीकार्न चाहँदैनन् त्यो हो; YouTube एक आफ्नै सामाजिक मिडिया मार्केटिंग प्लेटफर्म हो। धेरै मानिसहरूले YouTube लाई विशाल भिडियो मार्केटको रूपमा देख्दछन्; तपाईं सोशल मीडिया मिडिया प्लेटफर्ममा साझा गरिएका भिडियोहरू होस्ट गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने ठाउँमा। यो धारणा धेरै गलत छ। हामीलाई यो बुझ्नको लागि; हामीलाई स्थिति अपडेटको रूपमा अपलोड गर्ने प्रत्येक भिडियो लिनुहोस्। जब तपाइँको स्थितिमा कसैले टिप्पणी गरेको वा मनपर्दैन भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ? एक दर्शकको टिप्पणी आफ्नो भिडियो मा उसको वा उनको प्रतिक्रिया निश्चित गर्न प्रमुख तरिका हो। त्यसोभए तपाईले अब आवश्यकता देख्नुभयो किन कि यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको भिडियोमा मानिसहरूले टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ। एक YouTube टिप्पणी एक सामान्य भिडियो र लोकप्रिय बीचमा प्रमुख भिन्नता कारक हो। एक लोकप्रिय भिडियो स्पष्ट रूपमा सामान्य भिडियो भन्दा बढी टिप्पणीहरू र सments्लग्नताहरू हुनेछ। त्यसोभए, यदि तपाईं तपाईंको भिडियो एक लोकप्रिय बन्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंको भिडियोमा मानिसहरूले टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ। यदि तपाईं अर्गानिक रूपमा टिप्पणीहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्न भने, त्यसपछि अर्को उत्तम समाधान भनेको YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्नु हो।
अब म तपाइँलाई किन सबैजनाले YouTube टिप्पणीहरू किन खरिद गरिरहेको छु भन्न दिनुहोस्:
संलग्नता बढाइयो: जब तपाईं आफ्नो भिडियोमा यूट्यूब टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहुन्छ, नयाँ दर्शकहरू जुन तपाईंको भिडियो हेरिरहेका छन् हेर्नको लागि प्रलोभित हुनेछ र उनीहरू आफैं पनि टिप्पणी सेक्सनमा संलग्न हुन चाहन्छन्। यसले अधिक र अधिक दर्शकहरूलाई तपाईंको भिडियोमा टिप्पणी गर्ने अभिव्यक्ति दिनेछ, यसैले खोजीमा यसको श्रेणी बढ्नेछ। यसको नतिजाको रूपमा, अधिक र अधिक व्यक्तिहरूले तपाईंको भिडियो फेला पार्नेछन्।
खराब अण्डा फ्लश गर्नुहोस्: हामी सबैलाई थाहा छ YouTube त्यो ठाउँ होइन जहाँ सबै कुरा उत्तम छ। त्यहाँ दुश्मनी र पूर्वाग्रह धेरै छ। केहि धेरै मतलब मानिसहरु को नकारात्मक समीक्षा को एक धेरै को साथ तपाइँको टिप्पणी सेक्सन बाढी आउँछ। यस स्थितिलाई बचाउने एक तरीका भनेको YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्नु हो जब तपाईं उनीहरूलाई रिपोर्ट गर्नुहुँदा तिनीहरूलाई फ्ल्याश गर्नका लागि।
तपाईंको खरीद दृश्य अवयवहरू: एक चीज जसले सजिलैसँग तपाईंको खरिद गरिएको दृश्यहरू र मनपर्न सक्छ कम टिप्पणी-देखि-अनुपात हो। सामान्यतया जब तपाईंसँग जैविक अवलोकन र लाइक हुन्छन्, त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरूले एक वा दुई टिप्पणी छोड्दा ठीक लाग्दछ। त्यसोभए जब तपाइँ YouTube दृश्यहरू र मनपर्दो खरीद गर्नुहुन्छ, टिप्पणीहरू खरीद गर्न दिमागमा पनि राख्नुहोस् ताकि तपाइँको भिडियो श susp्कास्पद हुन नपरोस्। टिप्पणीहरू खरीद गर्दा तपाईंको खरीद गरिएको दृश्यहरू र मनपर्दोहरू जैविक रूपमा प्रकट हुनेछ।
द्रुत सल्लाह, जब तपाईं टिप्पणीहरू खरीद गर्न चाहानुहुन्छ, प्रयास गर्नुहोस् तपाईंलाई वास्तविक टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहोस्, जुन हामी डेलिभर गर्छौं। यी वास्तविक टिप्पणीहरू सजिलै YouTube एल्गोरिदमद्वारा ट्र्याक गर्न सकिँदैन। यी वास्तविक टिप्पणीहरू ती व्यक्ति हुन् जुन तपाईंको भिडियोमा सकारात्मक, सान्दर्भिक टिप्पणीहरू भुक्तान गरिएको छ। यी टिप्पणीहरू अर्थपूर्ण र अधिक यथार्थपरक छन्। यो बट्सबाट नक्कली टिप्पणीहरू भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ जुन प्राय: पटक हुन्छ; गडबडी शब्दहरूको जोडी जुन कुनै पनि अर्थमा अर्थपूर्ण हुँदैन।
तपाईंको टिप्पणीहरूलाई उच्च गुणवत्ताले के बनाउँछ?
जब तपाईं हामीबाट युट्युब कमेन्टहरू खरीद गर्नुहुन्छ, हाम्रो टोलीले तपाईंको भिडियो अवलोकन गर्नेछ र तपाईंको भिडियोको बारेमा प्रासंगिक, विचारशील र उन्नत टिप्पणीहरू लेख्न सुरू गर्दछ। हामी त्यसपछि अतिरिक्त माईल जाने गर्छौं र तपाईंको टिप्पणीहरूको वितरण धेरै दिनहरूमा फैल्यौं।
प्राय: अन्य आपूर्तिकर्ताहरूले जेनेरिक "महान भिडियो!" टिप्पणीका प्रकारहरू किनकि यो धेरै सजिलो र कम समय खपत हुने छ। यसबाहेक, तिनीहरू अगाडि बढ्नेछन् र केहि मिनेटमा उदाहरणका रूपमा सबै २० टिप्पणीहरू पुर्‍याउनेछन्।
छोटो अवधिको अवधिमा टिप्पणीहरूको आम्रति देखेको कुरा यो हो कि मानिसहरूले उनीहरू कहिले पोष्ट गरिएको देख्न सक्दछन् र यदि ती सबै समान समयहरूमा भयो भने, यो व्यक्तिले उनीहरूलाई खरीद गरेको यो निश्चित संकेत हो।
जब तपाईं हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ, तिनीहरू जैविक र प्राकृतिक देखिन्छन्!
मेरो भिडियोलाई टिप्पणीहरू प्राप्त गर्न कति लामो समय लाग्छ?
हामी तपाईंको भिडियो हेर्ने भएकोले, प्रासंगिक टिप्पणीहरू लेख्नुहोस् र त्यसपछि म्यानुअल रूपमा ती डेलिभर गर्नुहोस्, यसले पर्याप्त समय लिन्छ। सामान्यतया, तपाइँका टिप्पणीहरू तपाइँको भिडियो मा तपाइँको अर्डर राखे पछि-within-48 within घण्टा भित्र देखा पर्नेछ र तिनीहरूलाई केही दिनभरमा फैलाइनेछ तिनीहरूलाई थप प्राकृतिक र जैविक रूपमा देखा पर्न।
मैले भिडियोको लागि अर्डर गर्न सक्ने न्यूनतम टिप्पणीहरूको संख्या के हो?
हामी भिडियोमा डेलिभर गर्ने कम से कम टिप्पणीहरूको संख्या5टिप्पणी हो। नतिजाको रूपमा, यदि तपाइँ १० टिप्पणीहरू आदेश गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले टिप्पणीहरू फैलाउनको लागि १ देखि २ भिडियो URL हरू बुझाउन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं २० टिप्पणीहरू अर्डर गर्नुहुन्छ भने, तपाईं १ देखि video भिडियो URL हरू बुझाउन सक्नुहुन्छ।